Inona no hitan'ny buffer overrun? - Faq
Tena > Faq > Buffer overrun dtected - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Buffer overrun dtected - valiny tsotra amin'ny fanontaniana
Inona no hitan'ny buffer overrun?
nybuffer overrunefahitaizay nanimba ny fanjakana anatiny fandaharana. Tsy afaka manohy am-pilaminana ny famonoana ilay programa ary tsy maintsy hatsahatra izao. ” Ity olana ity dia mety hitranga rehefa misy fampiharana na fonosana serivisy Windows Vista napetraka.
Ahoana ny fanamboaranao ny buffer overrun hita amin'ny fiantsoana andraikitra?
Mandehana any amin'ny lahatahiry lalao (C: / Program Files (x86) / Steam / steamapps / mahazatra /Call of duty)
Ovao ny anaran'ny fisie 'CoDSP ' ho 'mohaa '
Sokafy ny Library Steam anao ary kitiho ny bokotra '+ ADD A GAME ... ' eo amin'ny zoro ambany ankavia eo am-baravarankely.
Kitiho ny 'Add a Non-Steam game ... '
Kitiho ny 'Browse ... '
Inona no mitranga raha toa ka tratra ny buffer overrun?
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, raha hitan'ny rafitrao ny buffer overrun dia mety ho lasa mivaingana na tsy afaka mi-boot ny solosainao. Raha tsy afaka manamboatra ny olana ho anao ireo fomba etsy ambony ireo, dia fotoana tokony hanandramana ny fanamboarana Startup.
Ahoana ny fanamboarana ny buffer mifototra amin'ny Windows 10?
Fix 2: Mihazakazaha SFC Sy DISM Command. Ho fanampin'izany, ny fisie sy ny rakitra Windows dia mety hitarika buffer overrun hita amin'ny solosainao. Mba hamahana ny olan'ny buffer mifototra amin'ny stack amin'ity tranga ity, dia azonao atao ny manandrana mampiasa ny System File Checker (SFC) sy ny fitaovana fampitaovana sary an-tserasera (DISM).
Fa maninona aho no diso amin'ny buffer over Steam?
Ny zavatra adaladala kokoa dia ny fivarotana antsinjarany mihazakazaka na amin'ny rafitra iray aza fa tsy ny etona. Raha maka tahaka sy mametaka ny exe antsinjarany ao amin'ny fampirimana etona ianao, dia miasa avy hatrany amin'ny fikapohana tsara ilay exe tsara, fa raha manandrana manomboka azy amin'ny alàlan'ny setroka ianao dia mahazo ny hadisoan'ny buffer overrun.
Ahoana ny fomba hamahana ny error error buffer an'ny Call of Duty 1?
Ity misy iray amin'ireo vahaolana tsotra indrindra ho an'ny adiresy buffer 1 buffer overrun error ..! Ny hany mila ataonao dia ny manova anarana ny codmp / codsp fotsiny amin'ny 'mohaa' ie 'mohaa.exe' ary mihazakazaka fotsiny. Raha tianao ny horonantsariko, omeo thumbs up ary omeo hevitra ny valinteninao .... ary aza adino ny manoratra! Manome ...